ဇီဝလောင်စာဆီ ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်မှုများသည် 'အနုတ်လက္ခဏာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု' ကို ပိုမိုနီးစပ်စေသည် – WorldRef
Australian National University မှ Andrew Hopkins သည် မကြာသေးမီက ဇီဝလောင်စာဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်သည် လူသားတို့အား "အနုတ်လက္ခဏာ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု" ရရှိရေး အိပ်မက်ကို အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ပိုမိုနီးစပ်လာစေရန် ရေးသားထားသည်။
By Andrew Hopkins ၊
သြစတြေးလျ အမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ လူမှုဗေဒဆိုင်ရာ ပါမောက္ခ
ဇီဝလောင်စာများအသုံးပြုခြင်းသည် လူ့ဖန်လုံအိမ်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျော့နည်းစေသည်။ အဲဒါက တစ်ချို့သော ရေနံကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကုမ္ပဏီတွေက 10% အီသနော (ဇီဝလောင်စာဆီ) အထိ ပါဝင်သော ဓာတ်ဆီ ကမ်းလှမ်းပါ။ သို့သော် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ရှောင်ရှားရန် အမှန်တကယ် အခွင့်အလမ်းရှိမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချရန် မလုံလောက်ပါ။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "အနုတ်လက္ခဏာ ဓာတ်ငွေ့များ" ကို ရည်မှန်းရပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ လေထုထဲမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကို ဖယ်ရှားပြီး စက်မှုမတိုင်မီ လေထုအတွင်း CO₂ အဆင့်သို့ ပြန်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤသည်မှာ တုန်လှုပ်ဖွယ်အလုပ်ဖြစ်သည်၊ လက်ရှိလေထု၏ အာရုံစူးစိုက်မှုမှာ၊ တစ်သန်းလျှင် အစိတ်အပိုင်း 410 (ppm)ပတ်ပတ်လည်နှင့်နှိုင်း ၂၀ppm စက်မှုတော်လှန်ရေးမတိုင်မီ။
အံ့သြစရာကောင်းတာက၊ ဇီဝလောင်စာဆီ သုတေသနမှာ မကြာသေးမီက အောင်မြင်မှုတွေ (အောက်ကိုကြည့်ပါ) က ဒီအလားအလာကို ခြေတစ်လှမ်း ပိုနီးကပ်စေတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇီဝလောင်စာဆီ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးစွာ သိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
အချဉ်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားသော ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် အီသနော သို့မဟုတ် ဇီဝဒီဇယ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသည့် ကြံ၊ ပြောင်းနှင့် ပဲပိစပ်ကဲ့သို့သော အစားအသောက်သီးနှံများကို အသုံးပြု၍ ရေနံလုပ်ငန်းသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဇီဝလောင်စာများ ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ဤကောက်ပဲသီးနှံများကို အကြီးစား စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စိုက်ပျိုးခြင်း၏ ဆိုးကျိုးများ ကြောင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေပါသည်။
သို့ဖြစ်ရာ ရေနံကုမ္ပဏီများလည်း ရှိလာပါပြီ။ ရန်ပုံငွေသုတေသနအစီအစဉ်များ ဒုတိယမျိုးဆက် ဇီဝလောင်စာ သီးနှံများ ဟုခေါ်တွင်သော အထူးသဖြင့် ရေညှိများ သည် မြေပြင်ထက် ရေတွင် စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် ပထမမျိုးဆက် ဇီဝလောင်စာများ၏ ဝေဖန်မှုများစွာကို ရှောင်လွှဲနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ရေညှိတွေ အများကြီးဝင်လာတယ်။ ပုံစံများ. ပင်လယ်ရေညှိသည် လူသိများသော macro-algae တစ်မျိုးဖြစ်ပြီး micro-algae ကဲ့သို့သော micro-algae အများအပြားလည်း ရှိပါသည်။ ရေညှိပန်းများ ညစ်ညမ်းသော မြစ်များနှင့် ရေကန်များတွင် ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
ရေညှိများသည် CO₂ ဓါတ်ပြုခြင်းတွင် စွမ်းဆောင်မှုမရှိပါ။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးမီက ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေက ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ သွားနေပါတယ်။
Exxon မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့သော သုတေသီများ ရေညှိများကို မျိုးဗီဇပြုပြင်ခြင်းတွင် အောင်မြင်ခဲ့သည်။ နှစ်ဆ ကာဗွန်ထုတ်ယူနှုန်း။ အမှီအခိုကင်းစွာ၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှ သုတေသီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့သည် သက်သက်ဖြစ်သည်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိ ရက်သတ္တပတ်များထက် ရေညှိစိုက်ပျိုးနည်း၊ ပိုမိုထိရောက်သော ဇီဝလောင်စာထုတ်လုပ်မှုအတွက် လမ်းခင်းပေးသည်။
မှန်ကန်သော ရေညှိမျိုးများကို လုံလောက်သော ပမာဏဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်လျှင် နောက်တစ်ဆင့်မှာ ၎င်းကို ဇီဝလောင်စာအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပထမမျိုးဆက် ဇီဝလောင်စာသီးနှံများသည် အချဉ်ဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့် လောင်စာအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော သကြားနှင့် ကစီဓာတ်များ ကြွယ်ဝပါသည်။ ရေညှိကို ဤနည်းဖြင့် ပြောင်းလဲ၍ မရပါ။ သို့သော် အသုံးပြုနိုင်သည့် အခြားသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ရှိသေးသည်။ pyrolysis.
ရေညှိကဲ့သို့သော ဇီဝဒြပ်ထုကို အောက်ဆီဂျင်ရှိနေချိန်တွင် အပူပေးပါက လောင်ကျွမ်းသွားသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ကာဗွန်သည် လေထဲမှ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာ CO₂ အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ သို့သော် အောက်ဆီဂျင်မရှိလျှင် အပူရှိန်မလောင်နိုင်ပါ။ ယင်းအစား ဖြစ်ပျက်သွားသည်မှာ အမျိုးမျိုးသော ဆီများနှင့် ဓာတ်ငွေ့များကို စွန့်ထုတ်ပြီး ချာ သို့မဟုတ် ကာဗွန်ဟု ခေါ်သော အတော်လေး သန့်စင်သော ပုံစံကို ချန်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘိုင်အိုချာ. အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်ကို pyrolysis ဟုလူသိများပြီးသစ်သားမီးသွေးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲရန်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျင့်သုံးခဲ့သည်။
မီးသွေးကို အထူးပြင်းထန်စွာ လောင်ကျွမ်းစေပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ သတ္တုထုတ်လုပ်ရာတွင် ကဲ့သို့ အလွန်မြင့်မားသော အပူချိန် လိုအပ်သည့်နေရာတိုင်းတွင် တန်ဖိုးရှိသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို အောက်ပါဇယားတွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ မီးလောင်သောအခါတွင် ဓာတ်ငွေ့သည် ပီရိုလိုင်ဇာကို လည်ပတ်ရန် လိုအပ်သည်ထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုအပူထုတ်ပေးပြီး ပိုလျှံနေသော ဓာတ်ငွေ့များကို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ရေနံစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ဆီတွေကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလောင်စာအဖြစ် အလွယ်တကူ သန့်စင်ပါတယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ရေနံကုမ္ပဏီများသည် pyrolysis သုတေသနအတွက် ရန်ပုံငွေရှာကြသည်။
Pyrolysis သွင်းအားစုများနှင့် အထွက်များ
ပြင်းထန်သောအပူရှိန်ဖြင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းအပြင်၊ ဘိုင်အိုချာတွင် အခြားအရေးကြီးသော လက္ခဏာနှစ်ရပ်ရှိသည်။ ပထမဦးစွာ၊ ၎င်းသည် တန်ဖိုးရှိသော မြေဆီလွှာ ဖြည့်စွက်စာဖြစ်ပြီး အမှန်တကယ်တွင် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် စိုက်ပျိုးရေးအသုံးပြုသူများထံ ရောင်းချသည်။
ဒုတိယ၊ မြေကြီးထဲသို့ ရောနှောသွားသောအခါတွင် ၎င်းသည် နှစ်ရာနှင့်ချီ၍ ရှင်သန်နိုင်သည်၊ ထောင်စုနှစ်တစ်ခုပင် ဖြစ်နိုင်သည်။ char များထုတ်လုပ်ပြီး မြေဆီလွှာတွင် သိမ်းယူခြင်းသည် ကာဗွန်ကို ဖမ်းယူခြင်း၏ တစ်ပိုင်းအမြဲတမ်းနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်၊ သစ်တောများသည် ခိုင်ခံ့မှုနည်းပါးပြီး သစ်ပင်များသည် နောက်ဆုံးတွင် သေဆုံးပြီး ပုပ်သွားကာ လေထုထဲသို့ မီသိန်းနှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်များ ပြန်ဖြစ်လာသောကြောင့်၊ သို့မဟုတ် လောင်ကျွမ်းစေပြီး CO₂ ကို လေထုထဲသို့ ပြန်ပေးသည်။ ထို့ကြောင့် Pyrolysis သည် ရေရှည်ကာဗွန်စုပ်ယူမှု ဖြစ်နိုင်ခြေကို ပေးသည်- ၎င်းသည် အနုတ်လက္ခဏာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုဆီသို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။.
pyrolysis နှင့် ပတ်သက်၍ သတိပြုရမည့် နောက်ဆုံးအချက်မှာ အပူချိန်နှင့် ရေညှိအမျိုးအစားကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များ ကွဲပြားခြင်းဖြင့် အထွက်၏ အချိုးအစား ကွဲပြားနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်၊ တစ်ဦးသည် char ထုတ်လုပ်မှုကို အမြင့်မားဆုံး လုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလောင်စာအတွက် အသုံးပြုမည့် ဆီများ ထုတ်လုပ်ခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဇီဝလောင်စာဆိုင်ရာ သုတေသီများသည် မလိုလားအပ်သော ထုတ်ကုန်တစ်ခုအထိ အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ char ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံးကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် စိတ်ဝင်စားကြသည်မှာ သေချာပါသည်။
သို့ရာတွင်၊ ရေညှိ၏ pyrolysis သည် ဇီဝလောင်စာဆီထုတ်လုပ်ရာတွင် စီးပွားဖြစ်အသုံးတည့်သောနည်းလမ်းဖြစ်လာပါက၊ char ကို မြေဆီလွှာဖြည့်တင်းရန်အတွက် ရောင်းချနိုင်သည်။ ရလဒ်မှာ ကာဗွန်၏မြေဆီလွှာသို့ ပြန်သွားခြင်း—လက်တွေ့ကျကျ ပိုလက်တွေ့ကျကျ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်- တည်ငြိမ်သောရေစီးကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤအရာအားလုံးသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကျိုးအတွက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြီးမားသော char ထုတ်လုပ်မှုနှင့် နီးနီးကပ်ကပ်ရှိစေပါသည်။ စီးပွားဖြစ် အသုံးချနိုင်သော ဒုတိယမျိုးဆက် ဇီဝလောင်စာများ ပို့ဆောင်ပေးသော တူညီသော သုတေသနသည် char ၏ အထွက်နှုန်းကို အမြင့်ဆုံးဖြစ်စေရန် ပြန်လည်ညွှန်းနိုင်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဇီဝလောင်စာသည် မူလရည်မှန်းချက်ထက် ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။
ကံမကောင်းစွာပဲ၊ char အတွက် စျေးကွက်သည် ၎င်းကို စီးပွားဖြစ်အဆိုပြုချက်တစ်ခုဖြစ်အောင် လုံလောက်စွာ မဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ကာဗွန်၏ သိသာထင်ရှားသောစျေးနှုန်းသည် ဤအရာအားလုံးကို ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အနုတ်လက္ခဏာ ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကို ရရှိရန် အလေးအနက်ထားနေပါက၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်ရမည့် စျေးနှုန်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ မြေဆီလွှာကို ပေါင်းထည့်လိုက်တဲ့အခါ char ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ။ ပိုကောင်းမြဲ၊ char ၏ စီးပွားဖြစ်တန်ဖိုးသည် ကာဗွန်စျေးနှုန်း မလိုအပ်တော့ဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ကြီးမားသောအတိုင်းအတာဖြင့် char ထုတ်လုပ်မှုသည် မလိုလားအပ်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ရှိနိုင်ပါသလား။ ကျွန်တော်တို သိ မြေဆီလွှာရှိ လတ်ဆတ်သော biochar သည် ပေါင်းသတ်ဆေးများကို လျင်မြန်စွာ ရပ်တန့်စေပြီး ပေါင်းပင်ထိန်းချုပ်မှု အားနည်းစေသည်။ ဤရလဒ်များက မြေဆီလွှာတွင် ပေါင်းသတ်ဆေးများကို အားကိုးရသည့် စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေများတွင် ဇီဝချာအသုံးပြုမှုကို ဂရုတစိုက် စီမံခန့်ခွဲရန် လိုအပ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။ သို့ရာတွင် လယ်ယာထွက်ကုန် အကျိုးကျေးဇူးများ ပေါ်လာသည်။ လွှမ်းမိုးသော.